Yakanakisa Hydrauic Brake Tube Assembly Yb / T4164-2007 Mugadziri uye Fekitori | Jinxing
Hydrauic akamedura Tube Assembly Yb / T4164-2007
Iyo yakapetwa kaviri welded pombi ine yakanaka leakage kuramba, yakakwira nenyunje performance, yakanakisa
kudzokororazve, kwakatanhamara anti-kuneta kuita, kwakanyanya kwemukati kuchena, chaiyo geometry uye zvichingodaro.kushanda paramende: tensile simba Rm≥ 290Mpa Ipa simba: Rel≥180Mpa Percentage kukwirisa mushure mekutsemuka: A ≥ 25% Hutsanana hwe inwall: Residue≤ 0.16g / ㎡.
Kureba kwechikamu chakafumurwa chepombi pakati pezvikamu zviviri zvepombi pagungano repombi munzvimbo yakatwasuka.
Akaputsa hosipaipi connector
Kuwedzera kune kiramba, chidimbu chinobatanidza chakasungirirwa kumagumo epombi yekupwanya.
Dzinogara dzakabatana pombi majoini
Iwo akabatanidzwa pombi majoini achaunganidzwa nekupwanya kana kutonhora extrusion deformation, kana pombi majoini ezvakakanganiswa bushings uye ferrules zvinotsiviwa pese pese pombi painosanganiswazve.
Mhosva inokonzeresa kuti bhureki repombi ipatsanurwe kubva pombi yekubatana kana kubuda.
Kuvhara pombi yekubatanidza
Inoreva iyo inochinja-chinja yekutsvaira mweya kombi.
a) Icho chinobatanidza pakati pesimbi pombi mu brake system;
b) Hapana mapaipi majoini anodikanwa panguva yekuisirwa;
c) Kana uchiungana, kureba kwayo kusingatsigirwe kuri pasi pehurefu hwese hwechikamu chine pombi yesimbi.
1) Iyo hosi gungano inoshandiswa pakuyedza inofanira kunge iri nyowani uye inofanira kunge iine zera kweinenge maawa makumi maviri nemana. Chengetedza iyo hosi gungano pane tembiricha ye15-32 ° C kwemaawa angangoita mana bvunzo isati yaitwa;
2) Yeiyo hosi gungano yeiyo inoshanduka kuneta bvunzo uye yakadzika tembiricha yekudzivirira bvunzo, zvese zvishongedzo, senge simbi waya sheath, rabha sheath, nezvimwe zvinofanirwa kubviswa isati yaiswa pamidziyo yekuyedza.
3) Kunze kweye yakanyanya tembiricha yekudzivirira bvunzo, yakaderera tembiricha yekudzivirira bvunzo, ozone bvunzo, uye hose yakabatana ngura yekudzivirira bvunzo, mimwe bvunzo inofanirwa kuitwa mukamuri tembiricha ye15-32 ° C.
Pashure: Vacuum Brake Hose (yakajairwa neGG16897-2010)
Zvadaro: Zvinhu zvenaironi Air akamedura Hose
Yakarukwa Hydraulic Hose
Hydraulic akamedura Hose
Waya Yakarukwa Hydraulic Hose
Hydraulic akamedura hose gungano
Hydraulic akamedura Metal Fittings